အမျိုးသမီးများဆီမှ စာမူဖိတ်ခေါ်ခြင်း ~ Nge Naing
Thursday, November 19, 2009 Nge Naing 14 comments
ကျွန်မ ဒီနေ့ နောက်ဆုံး Assignment တခုကို အဆုံးသတ်ပြီး ဒီနှစ်အတွက် ကျောင်းအားလပ်ရက်ကို အခုပဲ စတင်လိုက်ပါပြီ။ အားလပ်ရက်မှာ ပထမဆုံး တင်တဲ့ပို့စ်ကတော့ ကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့ ပို့စ်မဟုတ်ဘဲနှင့် သူများအတွက် စာမူတောင်းပေးတဲ့ ပို့စ်ဖြစ်နေတယ်။ ကျွန်မဆီကို ကျွန်မ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၉၉၈ ခုနှစ်က အလုပ်သင် ၀င်ခဲ့ဖူးတဲ့ Alternative Asean Net Work on Burma (Altsean-Burma) ရုံးက အမျိုးသမီးများအသံ စာအုပ်အတွက် စာမူတောင်းလာပါတယ်။ စာအုပ်ထုတ်ဝေမယ့် အကြောင်းအရာနှင့့် အချက်အလက်တွေ ကို ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ ပြန်လည် ဖြန့်ဝေပေးဖို့ တောင်းဆိုထားတာ တွေ့လို့ မိတ်ဟောင်းဆွေဟောင်းတွေကို အကူအညီပေးတဲ့အနေနှင့် Win-Burmese font နဲ့ ရိုက်ထားတာကို Zawgyi one နဲ့ ပြန်ရိုက်ပြီး ပြန်လည် ဖြန့်ဝေလိုက်ပါတယ်။ စာအုပ်က နောက်နှစ် (၁၉။ ၀၆။၁၀ ) မှာ ကျရောက်မည့် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသမီးများနေ့ (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည့် မွေးနေ့) မှာ ထုတ်ဝေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၉၈ ခုမှာ ပတမအကြိမ် ထုတ်တဲ့ တိုက်ပွဲဝင် အမျိုးသမီးများအသံ (Voice of Women in the struggle) စာအုပ် ထုတ်တုန်းက ကျွန်မက အဲဒီရုံးမှာ အလုပ်သင်လုပ်နေချိန် ဖြစ်ပြီး စာအုပ်ထုတ်ဝေတဲ့ သနပ်ခါးအဖွဲ့က အဖွဲ့ဝင်တယောက် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘလော့ဂ်မှာ တင်ထားတဲ့ ပထဆုံး ရှေ့တန်းတိုက်ပွဲ အကြောင်းက (၁) နှင့် (၂) က အဲဒီမှာ ရေးခဲ့တာကို အနည်းငယ် ပြင်ဆင် နှစ်ခုခွဲပြီး ပြန်ဖေါ်ပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်အတွက် မြန်မာအမျိုးသမီး ဘယ်သူမဆို ပါဝင်ရေးသားနိုင်တဲ့အတွက် ဘလော့ဂါတွေနဲ့ စာဖတ်သူတွေ ညီမ အစ်မတွေအထဲ (မောင်တွေ အစ်ကိုတွေမပါ) မှ စိတ်ဝင်စား ရေးသားလိုသူ ဘယ်သူမဆို ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်။ ရက်က နည်းနည်း ကပ်နေပြီဖြစ်ပေမယ့် ရေးမယ်ဆိုရင်တော့ မှီပါသေးတယ်။ အောက်မှာ အစုံအလင် ဖတ်ကြည့်ပြီး ကျွန်မတို့ ဘလော့ဂ်လောကက ဘလော့ဂ်ရေးသူ၊ ဘလော့ဂ်ဖတ်သူတွေ လက်စွမ်းပြကြရအောင်။
“မြန်မာပြည်မှ အမျိုးသမီးများ၏ အသံ အတွဲ (၇)”
အမျိုးသမီးထု၏ သွေးစည်းညီညွတ်မှုကို အင်္ဂလိပ်မြန်မာ-နှစ်ဘာသာဖြင့် တင်ပြထားပါသည်။
“မြန်မာပြည်မှ အမျိုးသမီးများ၏အသံ (အတွဲ ၇)” ကို အင်္ဂလိပ် မြန်မာ နှစ်ဘာသာဖြင့် ထုတ်ဝေနိုင်စေရန် “စင်ပြိုင် အာစီယံ မြန်မာ” အဖွဲ့ (Altsean-Burma) ၏ ကူညီမှုဖြင့် စီစဉ်လျက် ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လှုပ်ရှားမှုနှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်လျက် ရှိသော အမျိုးသမီးများအား “မြန်မာပြည်မှ မြန်မာအမျိုးသမီးများ၏အသံ” အတွဲ (၇) တွင် ပါဝင် ရေးသားကြပါရန် “ သနပ်ခါးအဖွဲ့မှ” မှ လှိုက်လှဲစွာ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ “သနပ်ခါး” အဖွဲ့မှာ မြန်မာနိုင်ငံရှိ အလွှာအသီးသီးမှ တိုင်းရင်းသား အမျိုးသမီးပေါင်းစုံဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် နှောင်ကြိုးမဲ့သော အဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်။ သနပ်ခါးအဖွဲ့မှ အမျိုးသမီးများ၏အသံ စာအုပ်ကို ၁၉၉၈ ခုနှစ်ကတည်းက စတင်ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။
ပြည်တွင်းပြည်ပ နယ်စပ်ဒေသနှင့် နယ်မြေရပ်ခြား ဒေသများတွင် အခြေချ နေထိုင်လျက် ရှိကြသော မြန်မာပြည်မှ အမျိုးသမီးများသည် ဤစာအုပ်တွင် ပါဝင်ရေးသားနိုင်ပါသည်။ ပါဝင်ရေးသားရမည့် ပုဂ္ဂိုလ်များသည် အမျိုးသမီးများသာ ဖြစ်ရပါမည်။ မြန်မာနိုင်ငံသား အမျိုးသမီးများကို ဦးစားပေးစဉ်းစားပါမည်။ ကလောင်သစ်များကိုလည်း စာမူများ ရေးသားပေးပို့ပါရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။ မိမိ၏ အမည်ရင်း ဖေါ်ပြရန် အခက်အခဲ ရှိပါက နှစ်သက်ရာ ကလောင်နာမည် တခုခုဖြင့် ရေးသားပေးပို့နိုင်ပါသည်။
စာလုံးရေ ၃၀၀၀ ထက်မပိုသော ၀တ္ထု၊ ဆောင်းပါး (တို-ရှည်)၊ ပေးစာနှင့် ကဗျာများကို အင်္ဂလိပ် (သို့) မြန်မာဘာသာဖြင့် ရေးသားပေးပို့နိုင်ပါသည်။ မိမိစာမူအား ကိုယ်တိုင် ဘာသာပြန်ဆိုနိုင်ပါကလည်း အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ နှစ်ဘာသာဖြင့် ရေးသားပေးပို့နိုင်ပါသည်။ အဖြူအမဲ ဓါတ်ပုံ (သို့) ပန်းချီပုံများကိုလည်း ပို့ပေးနိုင်ပါသည်။ ယခင် တခြားနေရာတွင် ထုတ်ဝေခဲ့ဖူးသော စာမူများဖြစ်လျင် စာရေးသူနှင့် မူလထုတ်ဝေ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ပူးတွဲပေးပို့နိုင်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသမီးများ၏ ဆင်းရဲချို့တဲ့မှုကြားမှ ကြုံတွေ့နေရသော နေ့စဉ်ဘ၀ အတွေ့အကြုံများ ကြားမှ ပုံဖေါ် ရေးသားထားတဲ့ ၀တ္ထုဆောင်းပါးများ၊ အမျိုးသမီးများ၏ အသံများကို လက်ခံပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေနှင့် ဘ၀အမြင်များ၊ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်စဉ်များအား အထောက်အကူ ဖြစ်စေမည့် အကြောင်းအရာများကို ထင်ဟပ်ဖေါ်ပြ ရေးသားရပါမည်။ ပါဝင်ရေးသားရမည့် ဥပမာ အကြောင်းအရာများမှာ အောက်ပါအကြောင်း အရာများထဲမှ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
မိဘ၀တွင် ကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးသော အဖြစ်ပျက်များ
မိမိ မျှော်မှန်းသော အနာဂတ်ခရီး
မိမိဘ၀၏ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားမှု အတွေ့အကြုံ
မိမိစံထားလေးစား အားကျခဲ့သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ
မိမိစိတ်တွင် စွဲထင်နေသည့် ဖြစ်ရပ်တခုခု စသည်တို့အထဲမှ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
စာမူများကို အချိန်မီ ဘာသာပြန်နိုင်ရေးအတွက် (1/December/09 ) နေ့မှာ နောက်ဆုံးထား၍ ပေးပို့စေလိုပါသည်။ သတ်မှတ်ထားသော နောက်ဆုံးရက်မတိုင်ခင် ပေးပို့နိုင်ပါကလည်း ၀မ်းမြောက်စွာ လက်ခံပါမည်။
ဤစာအုပ် ထုတ်ဝေရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ-
-မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်ရေး တိုက်ပွဲများတွင် ပါဝင်လှုပ်ရှားနေကြသော မြန်မာနိုင်ငံမှ အမျိုးသမီးများ၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို မြှင့်တင်နိုင်ရန်
- အမျိုးသမီးများ၏ နိုင်ငံရေးနှင့် ကိုယ်တွေ့ဘ၀ လှုပ်ရှားမှု အတွေ့အကြုံ၊ အတွေးအမြင်များအား နိုင်ငံတကာက သိရှိလာနိုင်စေရန်၊
- လက်ရှိနိုင်ငံရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်မှု မရှိသေးသော အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အမျိုးသမီးများကို လက်ရှိမြန်မာ အမျိုးသမီးများ၏ “ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေး တိုက်ပွဲ” တွင် ပိုမို အထောက်အကူပြု ပါဝင်ပတ်သက်လာစေရေးအတွက် နိုးဆော်ရန် တို့ဖြစ်သည်။
စာမူများအား မြန်မာမှ အင်္ဂလိပ် (သို့မဟုတ်) အင်္ဂလိပ်မှ မြန်မာသို့ ဘာသာပြန်ဆိုရေးအတွက် စေတနာ့ ၀န်ထမ်းများအနေဖြင့် ကူညီရန်ဆန္ဒရှိပါက သနပ်ခါးအဖွဲ့မှ ကြိုဆိုပါသည်။
ဤအမျိုးသမီးများအသံ စာအုပ်ကို စိတ်ဝင်စားပြီး ပါဝင်ရေးသားနိုင်မည့် အမျိုးသမီးများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများထံသို့ ဤစာကို လက်ဆက်ကမ်း ဖြန့်ဝေပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
ဤစာအုပ်တွင် ပါဝင်ရေးသားလိုလျှင် ဖြစ်စေ၊ ဤစာအုပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အကူအညီပေးလိုလျှင်ဖြစ်စေ၊ ဘာသာပြန်ပေးလိုလျှင် ဖြစ်စေ၊ တခုခု စုံစမ်းမေးမြန်းလိုလျှင်ဖြစ်စေ၊ ဖေါ်ပြပါ တာဝန်ခံကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Tel: +66 871 840 325, +66 818 509 008 (office)
Tel: +66 817 797 490
Please write: Burma Women’s Book in the email subject heading.
P.O Box 296 Lard Prao Post Office
Fax. 662693 4939
Λ L T S E Λ N B U R M A A L T E R N A T I V E A S E A N N E T W O R K O N B U R M A campa i g n s , advocacy & capac i t y -bu i lding for human r i ghts & democr acy P O BOX 296, LARDPRAO POST OFFICE, BANGKOK 10310, THAILAND TEL ▼  850 9008 FAX ▼  275 4261 EMAIL ▼ altsean@altsean.org WEB ▼ www.altsean.org
BURMA ~ WOMEN'S VOICES BOOK EDITION 7
A Bilingual Expression of Women's Solidarity
((book submissions: DUE the 1st DECEMBER 2009))
All women from Burma are invited to join the Thanakha Team to produce the bilingual “Burma Women’s Voices” book Edition 7. The Thanakha Team isaloose network of women from many backgrounds working together to produce the “Burma Women's Voices” books since 1998. It is supported by Altsean-Burma.
If you areawoman of Burma, whether in Burma, on the border, in exile or resettled overseas, please send us your writings (stories, poems…etc…) or drawings for inclusion in the book.
We would like to invite you to submitastory in either English or Burmese (or both if you can translate your own article), not more than 3,000 words in length, in the form of short stories, letters, articles or poems. Artwork, photographs or drawings in Black-and-white are also welcome. In addition to original contributions, previously published work is also welcome, with permission of the writer and publisher.
We are accepting stories and artwork until the 1st of December 2009. Please submit your stories as soon as possible.
We have received stories from many women so far that describe the struggle of women’s life choices and how they are continuing their lives despite the obstacles and hardships, sending an overall message of hope and perseverance.
Your stories can coverarange of topics and styles that reflect your thoughts and experiences. They could be about:
• An incident in your life
• Experiences in the struggle
• What you would like to change about the current situation in your life or your country
• People who have inspired you
• Something you feel strongly about
We encourage you to describe how you are finding the answers to the questions in your life and how you are moving forward. If you are writing about certain struggles in you life, please also describe what has helped you to overcome them. Λ L T S E Λ N B U R M A A L T E R N A T I V E A S E A N N E T W O R K O N B U R M A campa i g n s , advocacy & capac i t y -bu i lding for human r i ghts & democr acy P O BOX 296, LARDPRAO POST OFFICE, BANGKOK 10310, THAILAND TEL ▼  850 9008 FAX ▼  275 4261 EMAIL ▼ altsean@altsean.org WEB ▼ www.altsean.org
If you are worried about writing under your real name, you can choose to write undera‘pen’ name (alternative name).
This edition of “Burma Women’s Voices” will feature artwork (drawing, paintings or photographs) by women of Burma. Please consider the aims of the book when you submit your artwork. If you are interested in submittingapiece of artwork, please send it with an explanation of your piece and how it relates to our themes.
PLEASE SEND IN YOUR ARTICLES and ART WORK BY THE DEADLINE OF DECEMBER 1st 2009, to allow time for translation. We do welcome early submissions.
If you are interested in translating stories from Burmese to English, English to Burmese or editing Burmese stories, please let us know. Previous translating experience is requested and guidelines on translating will be provided. If you can and would like to translate your own article please do.
Background information about “Burma Women’s Voices” books
• Promote women from Burma who are working for human rights and democracy
• Educate the world about the political and personal perspectives and experiences of women in the struggle
• Motivate more individuals and organizations, particularly those not yet involved in the struggle, to be more supportive of the women of Burma and the struggle for democracy.
If you are interested in participating in the “Burma Women’s Voices” book or have any questions, please feel free to contact us at:
Tel: +66 818 509 008 (office); 087 184 0325
Tel: 081 779 7490
Please write “Burma Women's Voices” in the email subject heading.
We look forward to your contributions to the book.
Posted in: နိုးဆော်လွှာ
November 20, 2009 at 1:05 AM Reply
မြန်မာ အမျိုးသမီးတွေ ချည်းပဲလားဗျာ။ကျွန်တော်တို့ အလှည့်လဲ ရောက်ဦးမည်ထင်ပါတယ်။ မြန်မာအမျိုးသမီးထုအတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်ဗျာ။
November 20, 2009 at 1:29 AM Reply
အမျိုးသားတွေက အမျိုးသမီးတွေထက် အခွင့်အလမ်းပိုရှိတယ်မဟုတ်လား။ အဲဒါကြောင့် အမျိုးသမီးတွေအတွက်ပဲ စီစဉ်ပေးတာ ဖြစ်မှာပေါ့ ကိုချမ်းလင်းနေ။
November 20, 2009 at 1:35 AM Reply
Information လေးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မငယ်ရေ... အမျိုးသမီးတွေနဲ့ သက်ဆိုင်တာကို ရေးရမှာမို့ စိတ်လဲဝင်စားပါတယ်...
တခုခုလေးတော့ ကြိုးစားပြီး ရေးကြည့်ပါအုံးမယ်...
ရေးဖြစ်ရင် ပြောမယ်နော်...း)
November 20, 2009 at 1:59 AM Reply
မသက်ဝေရေ ကျွန်မကို ပြောစရာ မလိုဘူး။ ရေးဖြစ်ရင် Brooke ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးဆီကိုသာ မေးလ်နဲ့ ပို့ပြီး အကြောင်းကြားလိုက်ပါ။ ကျွန်မက ရေးချင်တဲ့သူတွေ ရေးလို့ရအောင် ကြော်ငြာပေးတာပဲ ရှိပါတယ်။ အဲဒီအဖွဲ့မှာ ကျွန်မ အလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ စာအုပ်ထွက်လာရင်တော့ ဖတ်ရတာပေါ့။
November 20, 2009 at 2:48 AM Reply
မငယ်.... အဲဒီသနပ်ခါးကထုတ်ဝေတဲ့စာအုပ်မှာ ညီမ လည်းနှစ်တိုင်းလိုလိုပါဝင်ရေးပါတယ်။ ကလောင်ကတော့ ဆောင်း တဲ့လေ။ Altsean-Burma မှာ intern လုပ်ဖူးတယ်။ ၂၀၀၂ ခုနှစ်ကပေါ့။ သတိရနေသေးတယ် လေ။
November 20, 2009 at 2:51 AM Reply
အိမ်တိုင်ယာရောက် တကူးတကလာဖိတ်သွားလို့ ကျေးဇူးပါ မငယ်နိုင်ရေ ။
ခန့် ခန့် ညားညား ကြီး စာအုပ် တအုပ် အနေနဲ့ ထုတ်မှာဆိုတော့ ၊အပျင်းပြေ အပျော်ဖတ် ကိုယ့် အရေးအသား ပေါ့ပျက်ပျက်ကြောင့် စာအုပ်ရဲ့ လေးနက်မှု ပျက်သွားမှာ စိုးရိမ်နေမိတယ် ။
လက်ခံတယ်ဆိုရင်တော့ အမှတ်တရ အဖြစ် နဲ့ ပေးပို့ချင်ပါတယ် ။ ရွေးတာ မရွေးတာ တော့ အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး ။ အင်အားပြတဲ့ အနေနဲ့လောက်ပါပဲ ။
November 20, 2009 at 8:12 AM Reply
အိအိချောက အဲဒီရုံးမှာ အလုပ်သင်လုပ်ခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတော့ Debbie နဲ့ ဘယ်နှစ်ကြိမ်လောက် ရန်ဖြစ်ဖူးလဲ မသိဘူး။ နှစ်တိုင်းရေးတယ်ဆိုတော့ ဒီနှစ်လည်း ရေးမှာပေါ့နော့် ကောင်းတယ်။
kiki ရေ အဲဒီစာအုပ်က Professional တွေ ရေးတဲ့ စာအုပ်မဟုတ်ဘူး အလွှာပေါင်းစုံးက အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အသံကို ထပ်ဟပ်ဖေါ်ပြချင်လို့ ထုတ်တာ ဖြစ်တယ်။ Literature ကို ကြည့်တာမဟုတ်ဘူး ဘ၀အတွေ့အကြုံနဲ့ ခံစားမှုတွေကို အဓိကထားပါတယ်။ ရေးသာရေးပါ။
November 20, 2009 at 11:36 PM Reply
ခုမှ ဒီBlog ကို တွေ့ တာပါ ကျောင်းသူတယောက်ပါ
အမ ကို လေးစားပါတယ်
ကိုယ်တိုင်ရေးနိင်အောင်လည်း ကြိုးစားပါမယ်
သူများနိင်ငံရဲ့ ပညာရေးအောက်မှာ၅ နှစ်ရှိပါပြီ
ကိုယ်နိင်ငံပညာရေးကို ၀မ်းနည်းမှိတယ် တပြိုက်နက် တည်းမှာပဲ ကိုယ့်အတွေ့ ကြူံတွေကို စာကြမ်းနဲ့ ပဲ ပုံဖော်မှိတယ် အားကျတယ်အမ
အမ စာတွေ ဆက်ရေးနိင်ပါစေ
November 21, 2009 at 1:14 AM Reply
နှစ်နိုင်ငံစလုံးမှာ တူညီတဲ့ ပညာရေးအဆင့်ကို တက်ထားဖူးရင် ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နှိုင်းယှဉ်ရေးသင့်ပါတယ်။ Professional Writer ဖြစ်ဖို့ မလိုပါဘူး။ အစ်မဘလော့ဂ်မှာ စာလာဖတ်တာ ၀မ်းသာပါတယ်၊ ကျေးဇူးလည်း တင်ပါတယ်။ နောက်လည်း အမြဲလာလည်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
November 22, 2009 at 8:37 PM Reply
Can send one of my story in Thanlwin AinMat?
November 22, 2009 at 10:13 PM Reply
စာမူ ဖိတ်ခေါ်တဲ့ ကြော်ငြာထဲမှာ အောက်ကစာပိုဒ်ကို တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် သံလွင်အိပ်မက်ထဲကဖြစ်ဖြစ် ဘယ်ထဲက ဖြစ်ဖြစ် ပို့လို့ရပါတယ်။ Brooke ဆီကို ပေးထားတဲ့ e-mail လိပ်စာအတိုင်းသာ ပို့လိုက်ပါနော့်။
"ယခင် တခြားနေရာတွင် ထုတ်ဝေခဲ့ဖူးသော စာမူများဖြစ်လျင် စာရေးသူနှင့် မူလထုတ်ဝေ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ပူးတွဲပေးပို့နိုင်ပါသည်။"
November 23, 2009 at 9:45 PM Reply
မမကိကိပြောသွားသလိုပဲ ဘလော့ခ်မှာ ရေးထားတဲ့အထဲက စာမူလေးတွေထဲက အကြိုက်ဆုံးလေးတော့ ပို့ချင်တယ် အမှတ်တရပေါ့ စာရေးတာတော့ သိပ်စနစ်မကျသေးတော့ အဆင်ပြေပါ့မလား မသိ :)
November 23, 2009 at 10:59 PM Reply
မဆုမွန် ပို့စ်တွေ အကုန်လုံး ကောင်းတာပဲ ရပါတယ်။ အမျိုးသမီးနဲ့ ပတ်သက်တာလေးဆို ပိုကောင်းတာပေါ့။ အစ်မလည်း Gender နဲ့ ဆိုင်တာ တခုခု ရေးချင်တာ ဘာပို့ရမှန်းမသိသေးဘူး။
August 19, 2010 at 2:17 PM Reply